ညို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ အလှတရား ပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးတွေ မျိုးစုံပေးနေတဲ့ ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေ – Real Link
ညို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ အလှတရား ပေါ်လွင်အောင် ပို့စ်လေးတွေ မျိုးစုံပေးနေတဲ့ ယွန်းမီမီကျော်ရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေ
အမြဲ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှ တရား တွေ ပြည့်နှက် နေပြီး ပရိသတ် တွေ အခိုင်မာ ရရှိ ထား တဲ့ ယွန်းမီမီကျော် ကို အထူး တလည် မိတ်ဆက် စရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ် နော်..။အနု ပညာ လုပ်ငန်း မှာ အောင်မြင်မှု တွေ ကို ရရှိထား တဲ့ မော်ဒယ်လ် မလေး ယွန်းမီမီကျော်က တော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အာရုံစိုက်မှု ကို ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။အမြဲတမ်း ဖက်ရှင် အလန်းစားတွေ နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လန်းနေတဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတွေ ကြောင့် လည်း ပုရိသ တွေ အများဆုံး ဝန်းရံ အားပေး ကြတာလည်း တွေ့ ရပါ တယ်..။
ချစ်စရာ ဟန်ပန် အမူအရာလေး တွေရယ် အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေး ရယ် ပိုင်ဆိုင်ထား တဲ့ သူမ ကတော့ ခုချိန် ထိ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ယွန်းက တော့ gym လည်း ပုံမှန် ဆော့တာ ကြောင့် အဆီပို မရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။လန်းလွန်းတဲ့ သူမ ရဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေ ကလည်း ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များ တာ တွေ့ရပါ တယ်..။
ယွန်းက တော့ သူမရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တွေ နဲ့ အနုပညာ ပုံရိပ်များ ကို ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ ပေါ် တွင် အများဆုံး ဖော်ပြလေ့ ရှိတာ တွေ့ရပါ တယ်..။လတ်တလော မှာတော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်း တဲ့ ဖက်ရှင် အလန်းစား လေး နဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ ရပါ တယ်..။ ပုံလေး တွေ တိုင်းမှာ အခါခါ ပြန်ကြည့် ချင် ပြီး မရိုးရ အောင် လှရက်လွန်း နေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ကဲ…. ချစ်ပရိသတ်ကြီး တွက် ယွန်းမီမီကျော် ရဲ့ အလှပုံလေး တွေ ကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါ တယ်…။
အျမဲ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွ တရား ေတြ ျပည့္ႏွက္ ေနၿပီး ပရိသတ္ ေတြ အခိုင္မာ ရရွိ ထား တဲ့ ယြန္းမီမီေက်ာ္ ကို အထူး တလည္ မိတ္ဆက္ စရာ မလိုဘူး ထင္ပါတယ္ ေနာ္..။အႏု ပညာ လုပ္ငန္း မွာ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ ကို ရရွိထား တဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မေလး ယြန္းမီမီေက်ာ္က ေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ အာ႐ုံစိုက္မႈ ကို ရရွိထားတဲ့ သူတစ္ဦး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။အျမဲတမ္း ဖက္ရွင္ အလန္းစားေတြ နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ လန္းေနတဲ့ အမိုက္စား ပုံေလးေတြ ေၾကာင့္ လည္း ပုရိသ ေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံ အားေပး ၾကတာလည္း ေတြ႕ ရပါ တယ္..။
ခ်စ္စရာ ဟန္ပန္ အမူအရာေလး ေတြရယ္ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလး ရယ္ ပိုင္ဆိုင္ထား တဲ့ သူမ ကေတာ့ ခုခ်ိန္ ထိ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ ရင္ထဲမွာ ရွိေနတုန္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ယြန္းက ေတာ့ gym လည္း ပုံမွန္ ေဆာ့တာ ေၾကာင့္ အဆီပို မရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။လန္းလြန္းတဲ့ သူမ ရဲ့ အလန္းစား ပုံေလးေတြ ကလည္း ပရိသတ္ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ား တာ ေတြ႕ရပါ တယ္..။
ယြန္းက ေတာ့ သူမရဲ့ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ေတြ နဲ႔ အႏုပညာ ပုံရိပ္မ်ား ကို ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚ တြင္ အမ်ားဆုံး ေဖာ္ျပေလ့ ရွိတာ ေတြ႕ရပါ တယ္..။လတ္တေလာ မွာေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္း တဲ့ ဖက္ရွင္ အလန္းစား ေလး နဲ႔ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ ရပါ တယ္..။ ပုံေလး ေတြ တိုင္းမွာ အခါခါ ျပန္ၾကည့္ ခ်င္ ၿပီး မရိုးရ ေအာင္ လွရက္လြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။ကဲ…. ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီး တြက္ ယြန္းမီမီေက်ာ္ ရဲ့ အလွပုံေလး ေတြ ကို မၽွေဝ ေပးလိုက္ပါ တယ္…။
Previous post မြင်သူတိုင်း သဘောကျနှစ်ခြိုက်သွားစေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံလေးနဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်လေးများ
Next post ညို့အားပြင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်းရင်ခုန်သွားစေမယ့် MAY ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ